Izindaba - Ithuluzi lensimbi yensimbi - ukumelana nokugqoka okuphezulu, impilo ende nokusebenza kwezindleko eziphezulu
Ithuluzi lensimbi yinto yensimbi esetshenziselwa ukwakha amathuluzi wokusika, amathuluzi wokulinganisa, isikhunta namathuluzi wokugqoka amelana nensimbi.I-steel yensimbi inebulukhuni obuphakeme futhi ingagcina ubulukhuni obuphezulu emazingeni aphezulu okushisa, kanye nokuqina kokugqoka okuphezulu nobulukhuni obufanele.I-steel yensimbi ngokuvamile ihlukaniswe ngensimbi yensimbi yekhabhoni, insimbi yethuluzi le-alloy kanye nensimbi yesivinini esiphezulu.
Insimbi esetshenziselwa ukukhiqiza amathuluzi ahlukahlukene wokusika, ukushubazeka okubandayo nokushisayo kuyafa, amathuluzi wokulinganisa namanye amathuluzi abizwa ngethuluzi lensimbi.Zonke izinhlobo zensimbi zensimbi zinezidingo ezivamile, njengobulukhuni obuphakeme, ukumelana nokugqoka okuhle, ukuqina okuthile namandla, kanye nezazo izidingo ezikhethekile, ezinjengobulukhuni obomvu, ukumelana nomthelela, ukuzinza okulinganayo, ukumelana nokukhathala okushisayo nezakhiwo ezinhle eziphelele.Ukuze kuhlangatshezwane nalezi zidingo ezihlukile, izinsimbi zamathuluzi anezingoma ezahlukahlukene zisetshenziselwa ukukhiqiza, futhi inqubo yokwelashwa efanelekile yokwelashwa iyamukelwa.
I-TAA iphinde yathuthukisa i-blade entsha eyenziwe ngethuluzi lensimbi. Ngokusika, ukugaya amanzi nezinye izinqubo, ama-blade anokumelana okuningi kokugqoka nokumelana nomthelela.
Ithuluzi blade yensimbi zisetshenziselwa induku yocingo, amathuluzi wehadiwe, isakhiwo sensimbi, imishini yokwakha, insimbi, igiya, intwasahlobo nezinye izimboni
Yiziphi izinzuzo ithuluzi steel blade?
Ukusebenza kwezindleko ze ithuluzi lensimbi yensimbi iphezulu: izindleko ziphakeme kunensimbi ejwayelekile, futhi impilo yesevisi iphindwe kaningana ngebanga elijwayelekile. Ngesikhathi esifanayo, ukunciphisa imvamisa shot blasting umshini yesondlo, ukunciphisa umfutho umsebenzi abasebenzi. Ukumelana kokugqoka kweithuluzi yensimbi izindwani iphakeme kakhulu kunaleyo ejwayelekile yama-chromium blade emakethe!
Ithuluzi lensimbi yensimbi uhlobo lwento yokugqoka emelana nokusebenza okuhle. It has ephakeme kakhulu bafake ukumelana kuka ingxubevange steel, futhi has ubunzima okuhle, amandla kanye lokushisa eliphezulu eliphezulu futhi ukugqwala ukumelana.Impilo yesevisi yensimbi yensimbi ihlobene kakhulu nekhwalithi yokwelashwa kokushisa. Ukwelashwa kokushisa kwensimbi yensimbi kubonakala ngokuncishiswa kwe-spheroidal ukuze kutholakale isakhiwo esilinganayo nesilinganiselayo se-spheroidal, Ukwelashwa kokugcina kokushisa kuyacima nokushisa okushisa okuphansi (insimbi enejubane icinyiwe futhi ivuthwe ngo-560 ℃ amahlandla amathathu), ukuze thola ukuqina okuphezulu kwesakhiwo ngama-carbide amahle afanayo asatshalaliswe kumatrix we-martensite omnene futhi uqinisekise ukumelana nokugqoka kwensimbi yensimbi. Ukwelashwa kwangaphambi kokushisa kuyisigaba esisodwa, futhi ukwelashwa kokugcina kokushisa kuyacima kanye nokushisa okuphakathi naphakathi noma ukufudumala okushisa okuphezulu ukuthola izakhiwo ezinhle eziphelele.
Uyini umehluko phakathi kwensimbi yensimbi yensimbi nensimbi ejwayelekile?
TAA shot blasting umshini ithuluzi lensimbi blade inokubukeka okubushelelezi nokukhanyayo, izimbobo ezimbalwa zesihlabathi, impilo ende yenkonzo nokuqina okuhle kokugqoka.Mayelana namakhasi ajwayelekile aphansi kwe-chromium blade nokuqukethwe kwe-chromium ngaphansi kuka-11%. Ukukhishwa kwe-chromium okuphansi kunamaphutha amabi kakhulu, njenge-porosity, ukunamathela kwesihlabathi, ukufakwa kwesihlabathi, umgodi wesihlabathi, ukunwetshwa kwesihlabathi, ukuvalwa okubandayo, ukuthululwa okunganele, i-shrinkage porosity, umgodi wokuncipha, ukuntuleka kwenyama, i-sarcoma, njll.
Ziyini izinzuzo zokusebenzisa ithuluzi lensimbi yensimbi?
Ngokuvamile ithuluzi lensimbi linempilo ende yokusebenza, ngakho-ke liletha ukuphindisela okuphansi kokuphindisela.Second, ngenxa yensizakalo ende nokugqoka okuncane kwensimbi yensimbi yensimbi, kunciphisa ngempumelelo isimo lapho umshini wokuqhumisa uvaliwe ukuze ulungiswe, futhi unciphise izindleko zabasebenzi.
Ukukhiqizwa kwevidiyo yethuluzi lensimbi yensimbi:
Ngaphandle kwensimbi yensimbi yensimbi, i-blade yezinye izinto nayo ingatholakala,Okuqukethwe kwe-Cr-12%, 20%, 25% noma njengesicelo.
Nezinye izingxenye zokungcebeleka ze umshini wokuqhuma wokudubula kunganikezwa, njenge:imigwaqo yamasondo, impeller, icala lempepho, amaveni endiza, ikhanda lempepho, ipuleti lonogada, amapuleti olayini njalo njalo.
Iworkshop yokukhiqiza ehlanzekile necocekile yokusebenza okuphezulu umshini wokuqhuma wokudubula futhi izingxenye ezisele